Antivirus Plus | Best Antivirus for Windows - Bitdefender Myanmar
ယနေ့တွင် ဗိုင်းရပ်စ် တစ်ခု အား သုတ်သင်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ !
Windows ပေါ်မှ အင်တာနက် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အံတုသော အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေး
အမြင့်မားဆုံးသော လုပ်ဆောင်မှုမှ အမြန်နှုန်း နှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းအား ထိန်းပေးထားသည်။
ယခုတွင်ပင် ransomware ကုသဖြေရှင်းခြင်း နှင့်အတူ အလွှာပေါင်းစုံ ransomware ကာကွယ်မှု အသစ်NEW
Bitdefender VPN နှင့် Bitdefender Safepay ကဲ့သို့သော လှို့ဝှက်သီးသန့် tool များ ပါဝင်သည်။
AV-Comparatives, ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀
1 device X
up to3devices X
Windows အားလုံးအား ခြိမ်းခြောက်မှုများထံမှ ကင်းဝေးစေသည်
Bitdefender ၏ အလွှာပေါင်းစုံ antivirus ကာကွယ်မှုသည် သင့် Windows လုပ်ဆောင်မှုစနစ်အပေါ် ပစ်မှတ်ထားသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအားလုံးထံမှ သင့်အား လုံခြုံမှုရှိစေသည်။
Bitdefender Antivirus Plus သည် သင့်စနစ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် virtual အနေဖြင့် သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများအပေါ် ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ပေးသည်။
Bitdefender Antivirus Plus တွင် အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစွာ စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းနိုင်သော အလွန်နားလည်ရလွယ်ပြီး သုံးစွဲရအဆင်ပြေသော interface တစ်ခုပါရှိသည်။
အထူးသဖြင့် အများသုံး အင်တာနက်များပေါ်မှ Wi-Fi ကို အသုံးပြုချိန် သင့်ဘဏ်အချက်အလက်၊ လှို့ဝှက်ကုဒ်များ နှင့် ဒေါင်းလုတ်များအား ဟက်ကာများ၏ရန်မှာ အကာအကွယ်ပေးသည်။
Windows, macOS, Android နှင့် iOS ကာကွယ်ခြင်း
Malware, spyware, adware များရန်မှာ ကာကွယ်မှု
Bitdefender Antivirus Plus သည် AV-Comparatives မှ “အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်” ဆုတံဆိပ် ဆွတ်ခူးခဲ့သည့် မျိုးဆက်သစ် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အား ထုတ်ပိုးပေးထားသည်။ ၎င်းသည် Windows PC များအား အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှု အမျိုးအစားအားလုံး၏ရန်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ရနိုင်သော လုံးဝ အင်အားပြည့် ထိရောက်မှုအရှိဆုံး anti-malware solution . Bitdefender Antivirus Plus သည် အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုအားလုံး (ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ worm များ နှင့် trojan များမှ စ၍ ransomware, zero-day exploit များ, rootkit များ နှင့် spyware တို့အထိ) ကိုအံတု လုပ်ဆောင်သည်။ သင့်အချက်အလက် နှင့် လှို့ဝှက်သီးသန့်ဖြစ်တည်မှုကို လုံခြုံစေသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Antivirus Plus သည် အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းတို့တွင် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကို ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်း၏ အသစ်သော ဆိုက်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှု intelligence နည်းပညာများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကွန်ယက်ပေါ်မှလုပ်ရပ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကာ ရှုပ်ထွေးသော exploit များ၊ malware သို့မဟုတ် botnet နှင့်ဆက်ဆိုင်သော URL များအပြင် ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများ ကို တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Antivirus Plus သည် သွားလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟုခေါ်သော နည်းစနစ်တစ်ခုကိုသုံးကာ အသုံးပြုနေသော အက်ပလီကေးရှင်းများကို အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်သည်။ ၎င်းမှ သံသယဖြစ်သည်ဟုထင်သည့်အရာကို စုံစမ်းမိသည့်အခိုက်အတန့်တွင် ၎င်းသည် ကူးစက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ရန် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှု ယူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ် စီစစ်ခြင်းနည်းပညာသည် သင့်အား ဒုက္ခရောက်စေမည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအပေါ် ဘယ်တော့မှ မရောက်သွားစေရန် သေချာစေသည်။ သင်လင့်ခ်တစ်ခုအား အမှန်တကယ် မနှိပ်မိခင် သင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိကို အဖြေရှာပါ။ Bitdefender Antivirus Plus သည် မြင်သာသော ကူးစက်ခံထားရသည့် လင့်ခ်များအားလုံးကိုလည်း တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။
အွန်လိုင်း အလိမ်အညာအီးမေးလ်များမှာ တိုးမြှင့်လာသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြင့် anti-phishing ကာကွယ်မှုသည် သင့်အား အန္တရာယ်ကျရောက်မှုမှ လွယ်ကူစွာပင် ကာကွယ်ပေးသည်။ Bitdefender Antivirus Plus သည် လှို့ဝှက်ကုဒ်များ သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်များကဲ့သို့သော ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကို ခိုးယူရန် စိတ်ချရသည့်အသွင်ယူထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို စုံစမ်းရှာဖွေပြီး တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Rootkits ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသည့် ဗိုင်းရပ်စ်အချို့ကို Windows မစတင်မှီကပင် ဖယ်ရှားပစ်ရန် လိုသည်။ Bitdefender Antivirus Plus မှ ထိုခြိမ်းခြောက်မှုများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းမိသောအခါ ၎င်းသည် ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် ပြန်လည်တည်ထောင်မှုအတွက် ကွန်ပျူတာကို ကယ်ဆယ်ရေး mode အနေဖြင့် ပြန်အစပြုသည်။
ဤ ဆန်းသစ်၊ ထူးခြားသော နည်းပညာသည် Bitdefender Antivirus Plus အား သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်၏ hardware နှင့် software ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတို့အပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် တွက်ချက်မှုအရင်းအမြစ်များကို သက်သာစေပြီး မြန်နှုန်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးမြှင့်စေသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Antivirus Plus သည် သင်ကစားနေချိန်၊ အလုပ်လုပ်နေချိန် နှင့် ရုပ်ရှင်တစ်ကားအားကြည့်နေချိန်တို့ကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းသောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်အား မလိုအပ်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့် မနှောင့်ယှက်မိစေရန် သိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် အရေးကြီးအရာအပေါ် အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ သင့်စက်များပေါ်တွင် သင်လုပ်မည့်အရာကို ရွေးချယ်သည့်အပေါ်မူတည်၍ Bitdefender သည် pop-up များ ကိုယာယီတားဆီးပေးပြီး အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ setting များကို ညှိပေးကာ အရေးမကြီးသော နောက်ခံလုပ်ဆောင်မှုများကို ရပ်နားထားပေးခြင်းဖြင့် သင့်စက်အား အသုံးပြုခြင်းအပေါ် အမြင့်ဆုံးစိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
Anti-tracker extension သည် သင့်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသော ခြေရာခံသမားများအား တားမြစ်ပိတ်ပေးပြီး ၎င်းသည် သင့်အား သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုချင်းအပေါ် ဤအချက်အလက်အား မြင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။ Anti-tracker သည် သင်၏ browsing အချက်အလက်ကို သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေပြီး ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ တက်စေခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
AV-Comparatives ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈
“၄၄ ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးသူ”